Sula imininingwane kusuka kuselula ye-Android ngaphambi kokuyithengisa | Izindaba zamagajethi
Okufanele ukwenze ngaphambi kokuthengisa iselula yami ye-Android?
Abantu abaningi banake ukwethulwa ngokusemthethweni kwamadivayisi amasha weselula, anikezela ngenqwaba yezici ezintsha futhi phakathi kwalapho isinqumo sekhamera engaphambili sigqamile, into esetshenziswa kakhulu yinani elikhulu labasebenzisi ngoba ngayo, amaSelfies aziwayo angenziwa.
Lokhu kungaba yisizathu esenza umuntu alingeke ukuthi athengise umakhalekhukhwini wakhe wamanje ukuze enze lokho thenga okusha sha. Uma uzokwenza lo msebenzi, sincoma ukuthi ulandele iziphakamiso ezilandelayo esizokhuluma ngazo ngezansi, ngoba kuzoya ngokuthi umnikazi omusha wefoni yakho endala ye-Android angayihlola ini kule divayisi.
1 Lokho wonke umuntu afuna ukukuvikela omakhalekhukhwini be-Android
2 Ukubethela imininingwane yethu kuselula ye-Android
3 Buyela "Kusimo Sefekthri" kumadivayisi eselula e-Android
4 Gcina idatha yamanga futhi uyisuse kusuka kufoni yakho ephathekayo ye-Android
Lokho wonke umuntu afuna ukukuvikela omakhalekhukhwini be-Android
Njengoba kunikezwe ukuthi namuhla omakhalekhukhwini abaningi be-Android banekhamera enhle kakhulu, kuba njalo ibhaxa elifanele lokuthatha okungcono kakhulu kwezimpilo zethu ngokusebenzisa isithombe esilula; Ngeshwa lezi zithombe zingathikameza abaningi, futhi kumele bazame ukuzivikela ukuze kungabikho omunye umuntu ongazibona. Kukhona nesici semiyalezo noma izingxoxo ngengxoxo, into ngandlela thile engaqoshwa emkhakheni omncane weyunithi yokugcina yangaphakathi yedivayisi.
Sincoma ukuthi ubuyekeze okufanele ukwenze ngaphambi kokuthengisa i-iPhone yakho noma i-iPad
Lokhu esesikubalile yingxenye encane yezindaba ezenziwe esikhathini esedlule, lapho umbiko ohlinzekwe ngumthengisi wesoftware yakwa-Avast Ubalule ukuthi "ukusetha kabusha kwasefekthri" komakhalekhukhwini akusebenzi ngendlela ongacabanga ngayo. Ocwaningweni kubalulwe ukuthi kusetshenziswe cishe izingcingo ezingama-20 ezinesistimu yokusebenza ye-Android esifundweni, ebizothengwa kwa-eBay. Kulezi zingcingo ezingamaselula ezisetshenzisiwe, kutholwe izithombe ezingaphezu kuka-40.000, ama-imeyili angama-750 nemiyalezo yawo kanye nohlu lwabaxhumana nabo ababalelwa ku-250.
Ukubethela imininingwane yethu kuselula ye-Android
Ngokwalokho esesikubalile ngenhla, ukuphepha nobumfihlo ifoni yethu ephathekayo ye-Android okufanele ibe nakho Kufanele kube yinto ebaluleke kakhulu; Enye yezindlela zokuqala ukwamukela ku "ukubethela kolwazi" kumadivayisi eselula.
Sibeke isithombe-skrini phezulu, lapho sizama ukukhombisa izinyathelo okufanele sizilandele ukwenza lo msebenzi. Kufanele nje uye kuzilungiselelo zohlelo lokusebenza (i-Android) bese ukhetha inketho ngakwesobunxele ethi «ukuphepha«. Ngakwesokudla kuzodingeka ukhethe inketho ethi «ngemfihlo iselula«. Ngale ndlela, uzobe uvikela imininingwane kufoni yakho ephathekayo ye-Android, ukubethela okuzovimbela ukuhlenga noma ukubuyisa imininingwane osule ngaphambili, ngoba noma ngubani ozama ukukwenza uzodinga ukhiye okhethekile ukususa ilokhi leyo.
Buyela "Kusimo Sefekthri" kumadivayisi eselula e-Android
Lesi ngesinye sezingxenye ezilula ukuzenza, into abasebenzisi bayo asebevele basebenzise inani elithile lamamodeli alawa maselula ngokuqinisekile bazoyisebenzisa le ndlela nenqubo.
Njengoba isithombe esingenhla sibonisa, konke okudingeka sikwenze ukuya ekucushweni kohlelo lokusebenza futhi kamuva, khetha inketho ethi ohlangothini lwesobunxele "Yenza isipele futhi ubuyisele". Kumele sikhethe masinyane inketho ezosivumela ukuthi sibuyisele idivayisi yeselula "esimweni sefekthri" sayo, okusho ukuthi yonke idatha izosuswa, kufaka phakathi imininingwane esiyisebenzisile ku-imeyili yethu noma ukufinyelela ku-Google Store Play Store.
Gcina idatha yamanga futhi uyisuse kusuka kufoni yakho ephathekayo ye-Android
Lesi isincomo esingeziwe esivame ukwenziwa ochwepheshe bezokuphepha kwamakhompyutha; Iqiniso ukuthi ngemuva kokubuyisela idivayisi yethu yeselula ku- "Isimo Sasefekthri" (njengoba siphakamisile ngenhla), umnikazi nomnikazi wale foni ephathekayo kufanele faka idatha eqanjiwe entweni oyilungiselela ukuyithengisa. Lokhu kusho ukuthi ngemuva kombuso wasefektri kufanele sisungule uhlu lwamakheli oxhumana nabo, engeza izithombe zanoma yiluphi uhlobo (ezingalandwa kuGoogle) futhi-ke, xhuma i-akhawunti yamanga nensizakalo ye-Google Play Isitolo.
Ngemuva kokwenza lo msebenzi, kufanele ubuyele "kusimo sefektri" kudivayisi yeselula ye-Android. Lapho uyithengisa, uma umnikazi omusha efisa ukubuyisa lolu lwazi, uzothola ukuthi yilona ebesilubekile phambilini nokuthi luyinkohliso.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Okufanele ukwenze ngaphambi kokuthengisa iselula yami ye-Android?
I-DupeGuru: Susa yonke impinda nge-saga yayo yamathuluzi